Onye ọchụnta ego njem mba Zambia na-anata onyinye nkwanye ugwu na India
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Awards » Onye ọchụnta ego njem mba Zambia na-anata onyinye nkwanye ugwu na India
Awards • Na-agbasa News Travel • India na -agbasa ozi ọma • News • ndị mmadụ • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche • Akụkọ kacha ọhụrụ na Zambia
Onye ọchụnta ego ndị njem njem nke Zambia na-anata ugwu ugwu India
Nlegharị anya nke Zambia nwanyị nwanyị ọchụnta ego Tecla Ngwenya enwetarala onyinye onyinye 2020 Woman Super Achievers Award maka nsonye pụtara ìhè ya na oke ọfụma ya na ndị njem na ile ọbịa.
Nwanyị nwanyị Zambia ahụ nwetara onyinye World Women Leadership na emume e mere na Mumbai, India, ụbọchị ole na ole gara aga.
Kọmishọna ukwu nke Zambia na India, Judith Kapijimpanga, kwuru na Dọkịta Ngwenya egosipụtala ezigbo ihe nrite na ụlọ ọrụ ile ọbịa wee mara ya n'ụwa niile.
Enweela Dr. Ngwenya maka afọ iri na itoolu ọ kacha mma na ụlọ ọrụ ile ọbịa na itinye aka na azụmaahịa ndị njem na Zambia.
N’ozi ezigara ọha na eze n’aka ndị isi mba Zambia dị n’India, onye isi ọrụ Zambia dị n’India kwuru na Dọkịnta Ngwenya abụwo onye pụrụ iche na osote onye isi oche nke Women of Value Africa (WOVA). Ọ bụkwa onye otu Council of Tourism Council nke Zambia, Hotellọ oriri na ọ Hotelụ Hotelụ na oriri nke Zambia, yana ndị otu ụlọ ọrụ ile ọbịa. Dọkịta Ngwenya bụ onye isi nchịkwa nke Tecla Investments Limited nke nwere ụlọ oriri na nkwari akụ na 3 lodges na Zambia.
Ọ bụ otu n'ime ụmụ nwanyị na-ahụ maka azụmahịa ndị njem nlegharị anya n'Africa na-achọ mgbanwe n'ime ụlọ ọrụ ndị njem nlegharị anya nke kọntinent ahụ bụ nke ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị mba ọzọ na-abụghị Africa na-achịkwa.
Na-achọ ka ụmụ nwanyị na-enye ikike na njem nlegharị anya, Women of Value Africa (WOVA) na-arụkọ ọrụ ugbu a na United Nations World Tourism Organisation (UNWTO) iji nye ụmụ nwanyị ike n'Africa.
WOVA na-elekwasị anya na mgbanwe nke ụmụ nwanyị na-azụ ahịa na mpaghara dị iche iche na-ebute ụzọ na njem, na-agbakwunye mpaghara uru ma ọ bụ nke njem nlegharị anya nke Africa iji nweta ohere n'ime ngalaba na ọrụ dị iche iche metụtara.
Womenmụ nwanyị nke Bara Uru Africa bụ nzukọ PAN Africa yana 100% Women Social Enterprise debara aha dị ka ụlọ ọrụ na-enweghị ego na South Africa. Na 2016, WOVA weputara Vision 2020 & Beyond na ebumnuche iji luso nsogbu ndị Women Co-ops na SMMEs chere ihu site na Enterprise & Supplier Development.